Lahatsoratra nataon'i Rishi Dave momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Rishi Dave
Ny marketing marketing-based (ABM) dia mahazo vahana eo amin'ireo mpivarotra B2B. Raha ny fanadihadiana natao vao haingana, 2017 B2B Programmatic Outlook, 73% amin'ireo mpivarotra B2B dia mampiasa na mikasa ny handray ny ABM amin'ny taona 2017. Ary misy antony marim-pototra izany: ny ROI an'ny ABM dia afaka mihoatra ny fampiasam-bola B2B hafa rehetra. Ny ABM dia zara raha foto-kevitra vaovao. Raha ny marina dia misy ny milaza fa efa nisy ny ABM raha mbola misy ny marketing. Paikady izay mandray ny kaonty tsirairay a